Borghese osisi ke Rome | Otu Di na Nwunye
Villa Borghese (Borghese Gallery Rome) nke oge a ka e kere iji nweta ọnụ ọgụgụ bara uru nke Cardinal Shipyon Borghese (Scipio Borghese), bụ onye nwere mmasị n'ịchịkọta ọrụ nkà. A mara ya dị ka onye na-achịkọta ya. Ozugbo ị zubere njem gị na Rom ma chọta ya ebe ịnọ, ebe ngosi ya a ma ama bu otu n'ime ebe ndi ozo kwesiri ibu n'uzo gi.
Echiche nke ịmepụta obodo nke obodo, dị ka ebe ọṅụ na obi ụtọ - Casa di Delizia, bilitere mgbe nchịkọta ya dị ọtụtụ na ama ama na Rome na Europe. Ewu ụlọ a malitere na 1613; onye a ma ama bu Flaminio Ponzio, na Giovanni Vazancio. N'ọdị mma na nhazi nke Park Park gbara gburugburu, ọ rụrụ Pietro Bernini, bụ nna nke ama ama Giovanni Lorenzo Bernini.
Cardinal Borghese gosipụtara nnọgidesi ike na nkà ma ọ bụrụ na o mezughị ngwa ngwa inweta ihe ngosi ọ na-amasị n'ụzọ iwu kwadoro. Ka ọ na njedebe nke ndụ ya, nchịkọta ahụ nwere ihe ngosi 800 na nchịkọta nke ihe osise ochie ndị na-enweghị nhata. Rome. O doro anya na Shipyon Borghese chọrọ ka e chebe ya ka ọ bụrụgodị na ọ nwụsịrị. N'ihi ya, a họpụtara ọrụ pụrụ iche maka ilekọta nchekwa nke nnakọta ahụ.
Osisi Borghese bụ akụ dị oké ọnụ ahịa nke nkà ihe osise na nke ihe osise dị iche iche nke oge dị iche iche. Ọ na-enye ndị ọbịa ahụ ihe ngosi, mmetụta dị iche iche na obi ụtọ. "Ihe nkiri ụwa, nchịkọta ọrụ ebube na amara maka anya ụmụ mmadụ ..." - nke a bụ otú onye edemede Italian bụ Franceschi si dee ihe banyere obodo ahụ na nchịkọta Borghese.
Nchịkọta ahụ dị n'elu ala abụọ ma na-anọchite anya eserese na ihe osise dị iche iche. Ị nwere ike ịmasị ihe osise nke ọtụtụ ndị nna ukwu a ma ama nke Renaissance nke ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ebe ahụ. Ka anyi kwuo banyere ihe kachasi anya ma di ha.
Osisi nke Images: Artists, Paintings, na Sculptures.
Pintouccio (Bernardino di Betto di Biagio). Foto "A kpọgidere obe na Jerome na Christopher" (1475).
Na ọrụ nke Pinturicchio, onye na-ese akwụkwọ Umbrian, na-egbuke egbuke, na-acha ọcha na ọbụna ihe eji achọ nlekọta nke eserese ahụ na ọnụ ọgụgụ dị elu. Ọrụ a bụ ọrụ ezigbo nnabata.
2. Sandro Botticelli "Madonna na nwa, John Baptist, na ndị mmụọ ozi" (1488).
Obodo mara mma nke art Sandro mezuru nrọ nke Florence banyere onwe ya na chittrocento na mmiri na-enwu enwu nke oge na-atọ ụtọ, afọ nke Michelangelo.
3. Raphael Santi "A Lady with a Unicorn."
Otu n'ime ọrụ a ma ama nke nnukwu onye nwe ụlọ. Na-arụ ọrụ na waaji, Leonardo da Vinci dere na nso nso a bụ Raphael, ọtụtụ nkọwa nke foto a pụtara ìhè.
4. Titian Vecellio "Ịhụnanya Dị Nsọ na nke Pụrụ Iche"
Onye na-ese egwu nke Venetian Renaissance, Titian mụọ Giorgione na Giovanni Bellini. N'oge mmalite nke okike, mgbe e dere eserese a, ndị nna ukwu abụọ ahụ nwere mmetụta. N'ihi ya, ọdịdị na-adịghị mma nke ịcha akwa ahụ, nkwekọrịta na-enweghị ntụpọ ma dị mgbagwoju anya.
5. Dosso Dossi "Wizard nke Circus, ma ọ bụ Melissa."
Na nka nke onye a ma ama a ma ama bu njikota ihe ocha, ochicho nke eserese na ogwu lyric, icho anwansi. Atụmatụ ndị a doro anya na foto a.
Correggio kere dị mfe na mmụọ na egwu egwu na ọrụ. Foto a dabeere na akụkọ banyere akụkọ Gris oge ochie banyere Danae. A zụtara foto na-adọrọ adọrọ, nke dị nro ma dị mma na Paris, iji mezie maka ihe ọjọọ osisi ahụ mere.
Ọrụ nke Caravaggio
Ọ gaghị ekwe omume ịghara ịhụpụta ọkwa nke nna ukwu ukwu ahụ bụ Caravaggio, nke mere ka eserese dum nke Europe. The gallery Borghese na-echekwa isii ọrụ ya. Ha nile na-akọrọ oge dị iche iche nke onye omenkà ma na-enwe mmetụta dị mma nke ndụ ya, dịka ọ dị, ya na ahụhụ ya, adịghị ike onye ahụ na mbọ ya ịzọpụta onwe ya. Ihe ngosi a na-eme n'egwuregwu ya:
-Caravaggio "Nwa okorobịa nke nwere nkata mkpụrụ."
Onye na-ese ihe malitere na eserese, jiri akara na-egbuke egbuke.
-Caravaggio "Sick Bacchus."
Ihe ịrịba ama mbụ nke ihe ngosi, nke gosipụtara ihe osise nke tozuru okè nke onye na-ese ihe, gosipụtara na ọrụ a. Ọ na-egwu egwu nke mmadụ; ọ gbalịrị iwepụta obere n'elu ya.
Ihe omuma omuma nke omuma ayi neme ka ayi chegharia uche banyere eziokwu ebighebi, mmeri nke mo madu dika anu aru, na uzo nke agabiga site na ndu nke madu di nfe n'elu ya.
-Caravaggio "Devid na Isi Goliath."
Ọrụ ikpeazụ nke nna-ukwu na obi iru uju nke na-abịa site na eserese ya.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọrụ kachasị mma nke ọkà mmụta amamihe bụ Gian Lorenzo Bernini, bụ onye jikwa ume iku ndụ n'ime marble, bụ ngwongwo ihe osise "Mgbapụta Proserpina" na "Apollo na Daphne":
-Jan Lorenzo Bernini "Mgbatị Proserpine."
Ihe osise nke Baroque na-egosi na oge ezighi ezi, akụkọ ifo a mere ka o nwee ike igosipụta ihe nkiri nke mgbagwoju anya n'oge nnabata nke chi nwaanyị Prozepin nke chi nke ala ala nke Pluto.
-Jan Lorenzo Bernini "Apollo na Daphne."
Ọrụ a na-agba mbọ ịchụso na ịlụ agha, na-akọwa akụkọ banyere chi a hụrụ n'anya bụ Apollon, banyere Nymph Daphne nakwa maka nhụsianya mwute ahụ nke na-echere onye ọ bụla na-atọ ụtọ, na-agbaso ụdị nke na-amị amị: n'ikpeazụ, ọ na-achọpụta naanị akwụkwọ mịrị amị na mkpụrụ osisi dị ilu aka ya. Ụdị omume a na-adịghị agbanwe agbanwe enyewo akụkọ ifo a na pope Roman Urban nke Asatọ Barberini.
Ihe ngosi nke ihe ngosi ahụ abụghị nanị akụ dị n'elu. N'etiti ndị ọzọ a ma ama, nchịkọta dị iche bụ busts nke Cardinal Spyon Borghese - ebe nchekwa nke onye nyerita gallery ahụ kwesịrị nnọọ nsọpụrụ a.
Category: Arts & Music, Europe, Italy, Uncategorized Tags: art, bernini, borghese gallery, caravaggio, Italy, Rom, ezumike obodo
← Esi mee Spaghetti alla Carbonara
3 Comments na "Borghese osisi: The Masterpieces Of Bernini And Caravaggio "
Nke a magburu onwe ya ịnakọta..Otu ndia nile bu ihe mara mma!
Daalụ maka izipụ isiokwu a dị egwu na ihe atụ nyeere m aka. .Aga n'ihu na ede ede
Daalụ maka ịkọrọ anyị ozi.